युवालाई रोजगारीमा जोड्ने अभियानमा छौं – Yug Aahwan Daily
युवालाई रोजगारीमा जोड्ने अभियानमा छौं
युग संवाददाता । २८ आश्विन २०७७, बुधबार ११:१५ मा प्रकाशित
371 पटक हेरिएको
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरसँग जोडिएको वडा नम्बर ९ मा पर्यटकीय स्थल काँक्रेविहार अवस्थित छ । यो मात्र होइन, यो वडामा शिवमन्दिर लगायत विभिन्न धार्मिक, साँस्कृतिक र पर्यटकीय स्थलहरु पनि छ । नगरका अन्य वडाको तुलनामा यो वडामा विकास र पर्यटनको सम्भावना धेरै छन् । तर तिनको विकासमा के पहल भए ? हालसम्म के प्रगति भयो त वडामा ? यही विषयमा केन्द्रित रहेर वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष सुरेश मानन्धरसँग हाम्रा सहकर्मी गीता थापाले कुराकानी गरेकी छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सांराश ः
विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि मेरो वडाका नागरिकलाई सचेत बनाउन लागि परिरहेको छु । वडाको नियमित काम पनि भइरहेको छ । विशेषगरी यही कोरोना महामारीलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र नागरिकलाई यसबाट कसरी सचेत बनाउन सकिन्छ भनेर लागि परिरेहको छु । यसैमा समय वितिरहेको छ ।
तपाइँ निर्वाचित भएयता हालसम्म वडामा के–के काम गर्नुभयो ?
म निवार्चित भएयता गरेको काम धेरै छन् । वडाकै पहलमा गरेका कामहरुमा मुख्यतया सडक विस्तारका कामहरु हुन् । मंगलगढीदेखि लाटिकोइलीसम्मको सडकलाई चौडा बनाएका छौं । फोरलेनको सडक निमार्ण कार्य भने टेण्डर प्रक्रियामा छ । यो फोरलेन सडक निमार्ण भएपछि वडा नम्बर ९ को विकासको ढोका खोल्ने विश्वास पनि लिएका छांै । व्यवस्थित सहरको रुपमा चिनिने मौका पनि पाउँछ । यसका लागि प्रदेश सरकार, नगरपालिका सबैबाट सहयोग पनि पाएका छांै ।
मुख्य सडक लाटिकोइलीदेखि कालुन्चोक चक्रपथसम्मको सकड पनि निमार्ण प्रक्रियामा रहेको छ । अहिलेसम्म वडाको ४८ वटा सडकको मापदण्ड कायम गरेका छौं । त्यस्तै, म वडा अध्यक्ष भएपछि काँक्रेविहारको मन्दिर निमार्ण कार्य सम्पन्न गरेको छु । पर्यटकीय स्थलको रुपमा रहेको काँक्रेविहार क्षेत्रको कम्पाउण्डको कार्य पनि टेण्डर प्रक्रियामा अगाडी बढाएर काम सुरु हुँदैछ । अर्काे धार्मिकस्थल शिवमन्दिर सामुदायिकको सहयोगमा एउटै ढुङ्गामा शिव पार्वतीको मुर्ति निमार्णको प्रक्रियामा रहेको छ ।
त्यस्तै निकास खोलालाई पनि हामीले पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गरेका छांै । सत्तेकाँडाबाट वीरेन्द्रनगर बजार हेर्न सकिने भएकाले पर्यटनभित्र जोडेर हामीले सडक सञ्जाल जोडेका छौं । लाटिकोइली स्वास्थ्यचौकी पहिला सञ्चालनमा थियो । म निवार्चित भएर आइसकेपछि जनतालाई पहिलो सेवा स्वास्थ्य नै दिनुपर्छ भनेर वडाकै पहलमा स्वास्थ्य चौकीमा एमवीवीएस डाक्टरको व्यवस्था पनि ग¥यौं । इमरजेन्सी सेवा पनि सञ्चालनमा ल्यायौ । २४ सै घण्टा आकस्मिक सेवाको व्यवस्था पनि गरेका छौं । त्यही स्वास्थ्य चौकीलाई १५ शैयाको अस्पतालको रुपमा निमार्ण पनि गर्दै छौं । त्यसका लागि निमार्ण गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएका छौं ।
शिक्षा क्षेत्रमा पनि हामीले विद्यार्थीहरु विद्यालयमा नजाने हुँदा उनीहरुलाई विद्यालयसम्म पु¥याउनका लागि वडाको सहयोगमा प्रावि विद्यालयमा अगार्निक निशुल्क खाजाको व्यवस्था ग¥यौं । त्यसपछि विद्यार्थीहरुको संख्यामा पनि बृद्धि भयो । हाम्रो वडा अन्य वडा भन्दा धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय हिसावमा अगाडी पनि रहेको छ । यो वडामा रहेका कांक्रेविहार, शिवमन्दिर, अधेरी गुफा, सत्तेकाँडा र गुम्बा लगायतका पर्यटकीय स्थलको प्रचार प्रसार गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ । वडाबासीलाई रोजगारीमा संलग्न गराउने, आर्थिक स्तरोन्नती गराउने र कृषिमा जोड दिइरहेका छौं ।
काम गर्नलाई कत्तिको चुनौती रहेछ नी ?
राजनीतिककर्मीहरुलाई काम गर्दा त चुनौती धेरै नै आउने गर्छन् । धेरै जसो चुनौती सडक विस्तार गर्दा भोग्नु पर्छ । मैले भागेको पनि छु । सडक निमार्ण गर्दा जग्गा मासिन्छ । त्यसमा जग्गा धनीले मुद्दा मामिला गरिदिने हुँदा समस्या हुने गरेको छ । विकास हाम्रै लागि हो भन्ने जनताले नबुझ्दा झन् समस्या भएको छ । धार्मिक स्थलको विकास, पर्यटकीय स्थलको विकास हरेक क्षेत्रमा विकास गर्दा पनि अवरोध आउँछन् नै ।
तपाइँको वडामा मुख्य समस्याहरु के–के छन् ?
मुख्य समस्या भनेको सडक विस्तार नै हो । सडक नभएसम्म कुनै पनि विकासको पुर्वाधार हुँदैन । सडक निमार्ण गर्दा लगत कट्टाको समस्या पनि छ । जग्गाकै विषयमा विवाद हुने र काम रोकिने समस्याहरु छन् । अर्काे समस्या भनेको अवस्थित रुपमा भवनहरु निमार्ण गर्नु रहेको छ । रत्नराजमार्गभन्दा तलतिर गुरुयोजना नहुँनु अर्काे समस्या रहेको छ ।
वडामा देखिएका समस्या समाधान कसरी गर्नु भएको छ ?
हामीले सडक विस्तारको काममा सहजीकरण गरेर ४८ वटा सडकको मापदण्ड कायम गरेका छौं । सडक निमार्ण गर्दा एउटै व्यक्तिको ७० प्रतिशतसम्म जग्गा बाटोमा जाने हुँदा काममा अवरोध आइरहेका छन् । विकासको नाममा व्यक्तिलाई सुकुम्बासी नै बनाउन पाइँदैन । यसका लागि राज्य पक्षले नै सहजीकरण गर्न जरुरी छ । यस्तै जनतामा चेतना फैलाउने काम सरकारस्तरबाट नै हुन जरुरी छ । सडक निमार्ण गर्दा सरकारले नै निजी सम्पत्ती मास्न नपाउने भनेर उल्लेख गरेको छ । त्यसको लागि सरकारले सडक निमार्ण गर्दा मासिने जग्गाको क्षतिपूर्ति सम्बन्धीत जग्गा धनीलाई दिने व्यवस्था मिलाइदिए काम गर्दा यस्ता बाधा अवरोधहरु उत्पन्न हुने थिएनन् ।
अहिलेसम्म गरेका राम्रा पाँच वटा काम बताईदिनुस् न ?
स्वास्थ्यको पहुँचमा जनतालाई नजिक राखेको छु । डाक्टरबाट सेवा दिने व्यवस्था गरेको छु । एमवीवीएस डाक्टरको व्यवस्था, इमरजेन्सी सेवा, २४ सै घण्टा आकस्मिक सेवाको व्यवस्था र स्वास्थ्य चौकीलाई १५ शैयाको अस्पतालको रुपमा निमार्ण पनि गर्दै छौं । पुर्वाधारतर्फ सडक मापदण्ड कायम गर्न सफल भएका छौं । मंगलगढीदेखि लाटिकोइलीसम्मसडक निमार्ण गर्न सफल भएका छौं । जातिय र वर्गिय हिसावले गरिव घरधुरीको पहिचान गरी गरिव परिचयपत्र वितरण गर्ने काम पनि सम्पन्न भएको छ । रोजगारी र सिपमुलक काममा जोडेका पनि छौं । यहाँको पर्यटकीयस्थल काँक्रेविहार मन्दिरलाई वडाको पहलमा निमार्ण कार्य गरिएको छ । कृषि क्षेत्रलाई पनि अगाडी बढाएका छौं । सामुहिक रुपमा कृषि उत्पादन गर्ने र यहाँको युवालाई रोजगारीमा जोडेका छौं ।
अबका योजनाहरु के के छन् ?
अबको योजना भनेको यहाँको पर्यटकीय स्थलहरु अझै बृद्धि गर्ने र व्यवस्थित गर्ने रहेको छ । त्यसका लागि यहाँ होटल व्यवसाय पनि वृद्धि गर्ने योजना रहेको छ । भ्यूटावर निमार्ण प्रक्रियामा पनि रहेको छ । दुई वटा पुल निमार्ण गर्नु छ । शिव मावि लाटिकोइलीमा वीएसी पढाउने लक्ष्य रहेको छ । कोपिला मावि प्रसेनीलाई सवओभरसेयर विषय थप गर्ने योजना रहेका छन् । कृषिलाई व्यापक रोजगारीमा जोडेर युवालाई रोजगारी दिने योजना छ ।